Faa’iidooyinka Caafiimaad ee Ku Duugan Cuntooyinka Qaar. | Hargeysa World~Herald
Dookha NoloshaFaa'iidooyinka Caafiimaad ee Ku Duugan Cuntooyinka Qaar.
Khubarada Caafimaadku waxay ina leeyihiin cuntadu waxay saamayn wayn ku leedahay caafimaadka qofka. Qaar kamid ah cuntooyinku waxay horseedaan in ay ka hortagaan cudurada.
Cuntooyinka qaar waxaa ku jira maadooyin ka hortaga dhaawaca soo gaadha nudayaasha jidhka. Cuntooyinkaas waxaa kamid tamaandhada(yaanyada), Yaanyada waxaa ku jira walax kiimikaad oo looyaqaano “lycopene”: taas oo ay tamaandhadu soo dayso marka la karkariyo. Walxadani waxay yaraysaa kansarka haleela dheefshiidka.
Khudradda cagaaran ee loo yaqaano “Spinach” waxa ay qani ku tahay walaxda kiimikaad ee loo yaqaano “Folic acid”. Walaxdani waxay ilmaha uurjiifta ah ka ilaalisaa dhibaatooyinka caafimaad. Sidoo kale, walaxdan “ Follic acid” waxay yaraysaa xanuunada wadna xanuunka.
Kalluunka ay ku jiraan walaxda kiimikaad ee OMEGA-THREE oo ah nooc kamid duxda laga helo hilibka kalluunka ayaa caaawisa xididada dhiigga ee xidhma. Sidoo kale, walaxdan kiimikaad waxay hoos u dhigtaa heerka dufanka ee jidhka. Walaxdani waxay unugyada maskaxda ka ilaalisaa asaasaqa. Kalluunka noocyada laga helo duxda loo yaqaano OMEGA-THREE waxaa kamid ah Salmon, Herrin, Mackerel iyo Bluefish.
Toonta oo aad looga isticmaalo geyiga Soomaalida ayaa Iyana ah mid ka hortagta xanuuno badan. Waxay ka dhigtaa xididada dhiiga qaar adag, iskana xejinaaya awooda tuurista dhiigga ee wadanha. Sidoo kale, toontu waxa ay yaraysaa heerka dufanka jidhka. khubaradu waxay sheegayaan in toonta oo saliid sayntuun lagu karkariyey ay ka hortagayso xanuunada wadna xanuunka iyo nooc kamid ah kansarka.
Sidoo kale, cilmi baadhsia ayaa tilmaamtay in shaah cagaarani faa’iido caafimaad oo ballaadhan u leeyahay ka-hor-tagga kansarka beerka iyo caloosha. Shaaha cagaarani waxa uu hoos u dhigaa noolayasha ili-ma-aragtayda ah ee ku tarna afka aadamaha.
Ugu danbayn, Jooklaatada oo dad badani aad u cunaan ayaa qayb ka ah korriinka miisaanka qofka. Khubaradu waxay leeyihiin jooklaatada waxaa ku jirta walax kiimikaad oo ka hor tagta noocyada kansarka iyo xanuunada wadnaha. Khubarada caafimaadku waxa ay caddeeyeen in Jooklaatadu aanay wax dhibaato ah u gaysan caafimaadka ilkaha.